Iibhotile zeeshampu ezilula nezilula ziyathandwa
Ngenxa yokuba uyilo lwebhotile yamanzi lungekho ngqiqweni, yiza nengxaki ezimbalwa ezingeyomfuneko ezivelisa inkqubo yokusetyenziswa, kufuneka ngaphezulu okanye kancinci kudibane ezimbalwa. Imveliso ishampu ibhotile yethu eqhelekileyo Usebenzisa umzimba ibhotile elliptical kunye PE opaque ukuba isibambiso mat ...
Amashishini ebhotile yamayeza okubulala izitshabalalisi nawo kufuneka aqhelane noyilo olutsha
Inkqubo yezolimo yala maxesha iqhubeka ngokungapheliyo, imakethi yezolimo yelizwe lethu nayo iya kwinqanaba elingapheliyo, oomatshini. Ngokungena kwabaqeqeshi kwezolimo, abasebenzisi bebhotile yokubulala izinambuzane baqala ukutshintsha. Izitshabalalisi zibaluleke kakhulu kwimveliso yezolimo. Alt ...
Umngcipheko kwishishini lebhotile yeoyile yomnquma kufuneka ulumke kwaye uthintele
Kwixesha elidlulileyo, ioyile yomnquma, njengeoyile edliwayo ephezulu, ibiphezulu ngexabiso, ngokuhambelana nokusilela kolwazi malunga neoyile yomnquma. Ke ngoko, abathengisi beoyile abaninzi bathumela ioyile yexabiso lomnquma kumaxabiso aphesheya kwaye bathenga ioyile yeoyile kwiibhotile ekhaya ukuze bafumane inzuzo ephezulu. Kwixesha elidlulileyo ...
Izinto eziluncedo zokwenza izithambiso ngetyhubhu yevermicelli
Kutshanje, uninzi lwezinto zokuthambisa zithandwa kakhulu kwaye "intonga" inegama elinemfashini. Imakethi yokuthambisa ngoku, nokuba kungaphantsi kwepinki, isidlele sibomvu okanye isithunzi samehlo, sifuna ukuvela kwifom "yentonga" kuphela, sinokuphakamisa ukunyuka! Ke kutheni ivermicelli strip yenza upo ...
Uphuhliso lohlobo lweebhotile zeplastiki
Kunye nebhotile yeplastikhi yeyeza engapheliyo kuvela umbuzo kwishishini lokupakisha amayeza. Yenza iibhotile zeplastiki zonyango zibambe. Ngotshintsho oluqhubekayo lobuchwephesha kunye nenkqubela phambili, iibhotile zeplastikhi zonyango zenze inkqubela phambili ebonakalayo kwi-packag ...
Inkampani yaseKechang ihlalutya imeko yophuhliso lweshishini leetyhubhu yejel
Taizhou Kechang Plastic Industry Co., Ltd.kuyinto umenzi ngobuchule iimveliso zeplastiki, kubandakanywa gynaecological iityhubhu gel, iminyaka engaphezu kweshumi yamava imveliso, ukufuna ukugqwesa, Obusemagqabini ubunjani kunye nomgangatho injongo yethu inkonzo. Oku kulandelayo ...
Umahluko phakathi kweebhotile zeplastiki ezenziwe ngezinto ezahlukeneyo
Sijongana neemveliso zeplastikhi yonke imihla, ezinje ngeengxowa zeplastiki zokuhambisa izinto, iibhakethi zeplastiki zokulahla inkunkuma, iibhotile zeplastiki zokusela amanzi amaminerali njalo njalo. Ngaba uyazi intsingiselo yezinto zeplastiki zePET. I-PP. PE? I-PET ...
Ukunyuka kwemizi-mveliso yeplastiki
Ngokukhula kweminyaka yakutshanje, umzi mveliso weplastikhi wase China uye wavuka kwaye waba yindawo yokupakisha ngaphandle. Ukupakishwa okungaphezulu nangaphezulu kutshintshiwe ukusuka kwiibhotile zeglasi zangaphambili kunye neebhotile zeceramic ukuya kwibhotile yeplastiki. Iibhotile zeplastiki nazo zingena ...
Njengoko iibhotile zeglasi ziyaqhubeka ukubonakala kwimveliso yokupakisha iingxaki. Ewe, iibhotile zeplastiki ziyabamba. Iibhotile zeplastiki ngohlaziyo oluqhubekayo lobuchwephesha kunye nenkqubela phambili, ekugqibeleni zenze iibhotile zeplastiki kwishishini lokupakisha lenze inkqubela phambili ebonakalayo. Ngokweengcali zeshishini, ...
Iimveliso zokhathalelo lwempilo ezikrelekrele iibhotile zeplastiki ziya kuba yimeko yophuhliso lweebhotile zonyango
Okwangoku, nangona intengiso yokupakisha iibhotile zeplastiki inesakhono esikhulu, iingxaki ezikhoyo kwiibhotile zeplastiki zeemveliso zononophelo lwempilo azinakuhoywa. Kwiminyaka yakutshanje, umzi-mveliso weebhotile zeplastiki weemveliso zononophelo lwempilo uphuhlisile kwaye wakhula ngokuqhubekayo ...
Uyilo olutsha lungena kwinkampani yebhotile yezibulali zinambuzane
Imakethi yezolimo yase China isiya kwisikali kunye noomatshini, kwaye inkqubo yezolimo yala maxesha iqhubela phambili. Ngokungena kwabaqeqeshi kwezolimo, abasebenzisi bebhotile yokubulala izinambuzane baqala ukutshintsha. Izitshabalalisi zibalulekile kwimveliso yezolimo ...